बुद्धको एनिमेसन फिल्म रोकियो | Himalaya Television
Himalaya Television / कला - सँस्कृति / बुद्धको एनिमेसन फिल्म रोकियो	बुद्धको एनिमेसन फिल्म रोकियो
Published on May 20, 2012 with बुद्धको जीवनी देखाउने दाबीका साथ निर्माण थालिएको नेपाली एनिमेटेड फिल्म ‘जर्नी टु इन्लाइटमेन्ट’को काम रोकिएको छ। तुलसी घिमिरेको निर्देशन रहेको फिल्म आर्थिक स्रोतको अभावले निर्माण पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको हो। टुडी एनिमेसनमा बनाउन लागिएको फिल्मका लागि विदेशबाट विज्ञ तथा टेक्निसियन झिकाउनु पर्दा निर्धारित समयमा काम नसकिएको निर्देशक घिमिरे बताउँछन्।
‘फिल्म रोकिएको होइन। एक्सपर्ट आएको आठ देखि १० महिनामा काम सकिन्छ,’ घिमिरेले भने। २०६८ सालभित्रै फिल्मको काम सकाउने उनको योजना थियो। फिल्मका निर्माता छत्रहरि कार्की भने आर्थिक समस्याकै कारण निर्माण अघि नबढेको बताउँछन्। ‘पैसाकै कारण ६ महिनादेखि काम अवरुद्ध छ। थप आर्थिक स्रोत नभेटे काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने। आशा गरे अनुरूप लगानीकर्ता नपाउँदा कठिनाइ परेको उनले जानकारी दिए।
‘४ देखि ५ करोडमा फिल्म सकिएला भनेर काम थाल्यौं। गर्दै जाँदा २५ करोड भन्दा बढी नै खर्च सकिएला जस्तो लाग्यो। यति रकम हामीले मात्र जुटाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगेन त्यति लगानी उठाउनै सकिँदैन। त्यसको लागि फिल्म गुणस्तर चाहियो। फिल्म गतिलो बनाउन पर्याप्त प्राविधिक पनि छैन। लगानीकर्ता भेटिने सम्भावना पनि देखिनँ।’ बौद्ध दर्शन नभई सिद्धार्थ गौतमको किशोरावस्था देखाउने योजना निर्माण पक्षको थियो। नेपालमा पहिलो पटक एनिमेसनबाट पूरा लम्बाइको फिल्म बनाउन लागे पनि प्रविधि र पैसाको अनुमान गर्न नसक्दा योजना अधुरो बन्ने खतरा बढेको छ। ‘अरु फिल्म जस्तो भएको भए लटरपटर पूरा गर्न सकिन्थ्यो होला। तर, विषयको संवेदनशीलताले तथ्यहरुको संकलन गर्दै वास्तविक बनाउने प्रयास सजिलो भएन,’ कार्कीले बताए।
There are currently no comments on बुद्धको एनिमेसन फिल्म रोकियो. Perhaps you would like to add one of your own?
रेग्मीसहितको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणकाक्रममा दार्चुलामा
नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयवासीद्दारा कञ्चनपुरका दुइ वडामा अस्थायी तटबन्ध निर्माण सुरु